ဆရာတော်ဘုရားများ အလိုရှိရာအသုံးပြုဖို့အတွက် ကျောက်မျက်ရတနာများကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့မိသားစု – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဆရာတော်ဘုရားများ အလိုရှိရာအသုံးပြုဖို့အတွက် ကျောက်မျက်ရတနာများကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့မိသားစု
သရုပ်ဆောင်ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့ အရမ်းလှတဲ့မျက်လုံးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပြီး တစ်ခေတ်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးကွာနေတာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလေးကိုသာတစိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလှူအတန်းနဲ့ပက်သက်ရင်လည်း အရမ်းရက်ရောတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့မိသားစုက အခုဆိုရင်လည်း တောင်ကြီးဆရာတော်ကို ပင့်ဖိတ်ပြီး အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ကာ ကုသိုလ်တွေယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့”၂၂. ၇. ၂၀၂၀ Wednesday နေ့လေးမှာ အိမ်တော် မှာရယ် ဆိုင်မှာရယ် တောင်ကြီးဆရာတော် တို့အားပင့်ဖိတ်ပြီး ဘုရားအနေကဇာတင် , အာရုဏ်ဆွမ်း ကပ် ,ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆပ်ကပ် အလှုငွေ နဲ့ဆရာတော်ဘုရားများအလိုရှိရာအသုံးပြုရန်ကျောက်မျက်ရတနာများလှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်. မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းမွန်မြတ်လှတဲ့ကုသိုလ် နှစ်ဖက် ဖိုးဖွားမိဘ နဲ့ ကျေးဇူးရှင်များ ကျေးဇူးရှိသူခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါးတို့ထပ်တူထပ်မျှ ရကြပါစေသား”
“မကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်မကောင်းသောလူလိမ်လူယုတ်မာနဲ့မကောင်းသောဝဠ်ကြွေး ကျိန်စာ အကုသိုလ်နဲ့ ဘေးရန်ကင်းအပူငြိမ်း ကျန်းမာချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအနာရောဂါကင်းဝေးပြီးအပူငြိမ်းပြီးတရားထူးတရားမြတ်ရရှိပြီးသာသနာပြုနိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါစေသားတပည့်တော်မတို့သည်လဲအသက်ရှည်အနာမဲ့ဘေးရန်ကင်းပြီးအမြဲလှုနိုင်တန်းနိုင်သောသာသနာပြုရသောလူဖြစ်ရပါစေသား နေ့စဉ်အလှုကုသိုလ်တွေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်ပြုရပါစေသား”ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
Source&Photo Credit:Zin Zin Zaw Myint’s Facebook Account
ပလိုင်းလေးကို လွယ်ပြီး အိမ်ခြံဝန်းထဲက မေမေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ စိုက်ခင်းထဲမှာ အမွှေစိန်လေးလုပ်နေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
မှော်ဘီခြံထဲမှာ မီးပျက်နေတာတောင် နောက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ ခင်လှိုင်